Fashion – OOTDMYANMAR
EXTRA CHIC WAYS TO ROCK 2021
No Comments on EXTRA CHIC WAYS TO ROCK 2021
We always see MDS Myanmar clad in elegant dresses and girly vibes. So we styled some pieces to prove that MDS Myanmar isn’t just for the girly girl vibe. They are all about versatility. They can be formal, girly, sporty, and cool too!
MDS Myanmar လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ ကျက်သရေရှိပြီး မိန်းကလေးဆန်တဲ့အဝတ်အစားတွေကို ပြေးမြင်မိကြမှာပါ။ ဒါကြောင့် MDS Myanmar မှာ မိန်းကလေးဆန်တဲ့အငွေ့အသက်တစ်ခုပဲ ရနိုင်တာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကို သက်သေပြဖို့ OOTD Myanmar က ဝတ်စုံအချို့ကို တွဲဖက်ဝတ်ဆင်ပြထားပါတယ်။
Below are ways OOTDs, you could get inspo from this 2021:
အောက်မှာပြထားတာတွေကတော့ ၂၀၂၁ မှာ အားလုံးလိုက်ဝတ်ကြည့်လို့ရနိုင်မယ့်စတိုင်လေးတွေပါ။
LOOK #1 ALL BLACK GOTHIC (GOTHIC စတိုင် ALL BLACK)
Maizel Gathered Sleeve Blazer in Black @ KS 69,000. Lewis Pleated Romper in Black @ KS 69,000.
A coat + rompers +bucket hat +Dr. Martens boots
ကုတ်အင်္ကျီ + တစ်ဆက်တည်းဘောင်းဘီဂါဝန် + bucket hat + Dr.Martens boots
LOOK #2 DENIM -ON- DENIM WITH A TWIST (DENIM ပေါ်မှာ DENIM ထပ်ဝတ်မယ်)
Arun Puffy Dress in Light Blue @45,000 KS. Jewo Jacket in Light Blue @57,000 KS
Pair some structural denim dress and jacket. Add some blings foratwist.
Denim ဂါဝန်ကို ဂျက်ကတ်နဲ့ တွဲဖက်ဝတ်ဆင်ပါ။ အမြင်ဆန်းသွားအောင် အရောင်တောက်တောက် နားကပ် ဆွဲကြိုးလေးဖြည့်ပေးလိုက်ပါ။
LOOK #3 CLASHED HUES (အရောင်ရင့်တွေကိုတွဲဖက်ဝတ်ဆင်ပါ)
Yaletha Gathered Top in Pink @49,000 KS. Gretchen Straight Pants @49,000 KS.
Something colorful and formal. Match your heels with your pants and your top with sunnies.
အရောင်စုံပြီး formal ဖြစ်တဲ့ပုံစံ။ ဘောင်းဘီအရောင်နဲ့ ဖိနပ်အရောင်ကို တွဲစပ်ပါ။ အင်္ကျီအရောင်နဲ့ နေကာမျက်မှန်အရောင်လည်းလိုက်ဖက်ပါစေ။
LOOK #4 PASTEL SPORTY (SPORTY ဆန်ဆန်အရောင်ဖျော့)
Alena Belted Vest in Pink @69,000 KS. Deena Gathered Cami Top @29,000 KS. Alena Belted Cullotes @59,000 KS.
Suited hues of pinks with Air Jordan.
ပန်းရောင် suit နဲ့ Air Jordan.
PS Don’t forget to wear your mask!
Mask တပ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
Make sure to check more pieces here:
Styled & Shot by @joamarjohnc
Model @Yaminn Phyo Wai
Tags Fashion, hypebae, mdsmyanmar, ootd, ootdmyanmar
THE DENIMS TO ROCK THIS 2021
No Comments on THE DENIMS TO ROCK THIS 2021
၂၀၂၁ ကို စတင်ဖို့ အမိုက်စား DENIM တွေ
Model wears, ARUN PUFFY DRESS IN LIGHT BLUE @45,000 KS JEWO JACKET IN LIGHT BLUE @57,000 KS
Obviously denims have never once gone out of style—and that’s foragood reason. Just like any basic clothing essential (LBDs, button downs, white sneakers and such), denim adjusts to the current fashion landscape. So while we keep denims for 2021 here the denim pieces we are currently loving from MDS Myanmar.
Denim တွေရဲ့ ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့ သူတို့ရဲ့စတိုင်က ဘယ်တော့မှ ရိုးမသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်မှာရှိထားသင့်တဲ့ အခြေခံအဝတ်အစား၊ ဖိနပ် (LBDs, button downs, sneaker အဖြူ နှင့် အခြား), တွေလိုပဲ Denim ကလည်း လက်ရှိဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်းမှာ နေရာယူနေသေးတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ၂၀၂၁ မှာလည်း denim တွေဝတ်ဖို့စိတ်ကူးထားတယ်ဆိုရင်တော့ လတ်တလော အကြိုက်တွေ့နေတဲ့ MDS Myanmar ရဲ့ denim ဒီဇိုင်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
EZRIE DENIM JACKET IN DARK @53,000 KS
ARUN PUFFY DRESS IN LIGHT BLUE @45,000 KS
JEWO JACKET IN LIGHT BLUE @57,000 KS
KENI DENIM SKIRT IN BLUE @45,000 KS
AERYN DENIM SKORTS IN BLUE @49,000 KS
Make sure to rock 2021 withagreat sense of style! ၂၀၂၁ ကို အမိုက်စားစတိုင်တွေနဲ့ စတင်လိုက်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။ You can shop from their website to get the best deals at အကောင်းဆုံး အတန်ဆုံးဈေးနှုန်းတွေနဲ့ website မှာလည်း ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Tags Collaboration, denims, Fashion, mdsmyanmar, ootdmyanmar
Christmas မှာ ဘာဝတ်ကြမလဲ
If you are asking yourself what the right OOTD to wear on Christmas Day is, we’re here to give you some suggestions.
Christmas နေ့အတွက် ဘယ်ဝတ်စုံကအသင့်တော်ဆုံးလဲဆိုတာ စဉ်းစားရခက်နေလား၊ OOTD က အကြံဉာဏ်တစ်ချို့ပေးချင်ပါတယ်။
Well things are lookingalittle different this year because of the on going crisis but that shouldn’t let you shine this Christmas Day.
ကပ်ရောဂါကာလ မပြီးဆုံးသေးတာဖြစ်လို့ အရာရာကတော့ မနှစ်ကအခြေအနေနဲ့ အနည်းငယ်ကွဲပြားနိုင်ပေမယ့် ဒီ Christmas ကာလကို အလှပဆုံးကျော်ဖြတ်လိုက်ပါ။
So below are the outfits we are currently loving from MDS MYANMAR .
ဒါကြောင့် လတ်တလော အကြိုက်တွေ့နေတဲ့ MDS MYANMAR ရဲ့ ဝတ်စုံအချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Valtteri Ruffled-Hem Dress in Multi Abstract /KS 50,000.00
Dexie Asymmetrical Frilly Dress in Pink Blue / KS65,000.00
Flared Midi Dress in White Multi/ KS 65,000.00
Maizel Gathered Sleeve Blazer in Oxblood/ KS 69,000.00
Kalie Side Ruched Dress in Blush/ KS 54,000.00
Yorina Halter Lace Dress in Red/ KS 59,000.00
Georgia Lace Dress in Red/ KS 69,000.00
Gretchen Straight Pants in Red/ KS 49,000.00
You can literally just shop straight to their website.
Website ကနေ တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူလို့ရနေပါပြီ။
PS They also have an on going Christmas promo code on their website.
PS website မှာ Christmas promo code လည်းရှိပါသေးတယ်။
ပျော်ရွှင်စရာပိတ်ရက်ဖြစ်ပါစေ, အချစ်များစွာဖြင့် !
Tags christmas, Fashion, mdsmyanmar, ootdmyanmar